एनआरएन सम्मेलन राजधानीमा सुरु (फोटो फिचरसहित) | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← NRNA इजरायलको नेतृत्व हस्तान्तरणको लागि व्यापक प्रचार प्रसार तथा सदस्यता वितरण
एनआरएन परिचयपत्रमा किन देखिएन आर्कषण ? →
एनआरएन सम्मेलन राजधानीमा सुरु (फोटो फिचरसहित)
प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईबाट उद्घाटन:
२५ असोज, काठमडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआएरएन) को पाचौँ विश्व सम्मेलन आजबाट राजानीमा सुरू भएको छ । एनआरएन सम्मेलनको यस वर्षको नारा ‘हाम्रो सञ्जाल, हाम्रो पहिचानः समृद्ध नेपाल’ रहेको छ ।
सम्मेलनको बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आर्मी अफिसर्स क्लब भद्रकालीमा आयोजित कार्यक्रमबीच गर्नुभएको हो । उदघाटन कार्यक्रममा सहभागीहरुलाई स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले एनआरएनलाई गफ हैन ठोस काम गरेर देखाउन आग्रह गर्नुभयो । नेपालमा शान्ति र संविधान निष्कर्षमा पुगोस् भन्ने विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीको चाहना र अवसरलाई गुम्न नदिने श्रेष्ठको प्रतिबद्धता थियो । सरकार एनआरएनहरुसँग सहकार्य गनै तयार रहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले नेपालीहरुले विदेशमा बसेर खेल्ने भूमिकाले नेपालको इज्यत र प्रतिष्ठा बढ्ने ठानेका विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नेपाल सरकारले एनआरएनहरुलाई अनौपचारिक राजदूत र संघलाई अनौपचारिक नियोगको रुपमा लिएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।
एनआरएन संस्थापक डा.उपेन्द्र महतोले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई नेपालमा यो भएन, त्यो भएन भन्नुभन्दा पनि नेपालका लागि केही गर्नतिर लाग्न आग्रह गर्नुभयो । ‘नेपाललाई गाली गर्ने अधिकारी त्यसलाई मात्र छ, जसले नेपालका लागि केही गरेको छ, गफमात्र गर्नेलाई त्यो अधिकार छैन’, महतोले भन्नुभयो ‘उपदेश दिन सजिलो छ काम गर्न सजिलो छैन ।’ राष्ट्रका लागि अहिले केही गर्ने बेला रहेको बेलामा काम नगरे भावी सन्ततीले धिक्कार्ने भन्दै महतोले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई पनि सचेत हुन र सहमति कायम गरी अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो ।
एनआरएन अध्यक्ष देवमान हिराचनले एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली भन्ने मान्यताअनुसार विदेशी नागरिकता लिएपनि नेपाली नै रहने संवैधानिक व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । हिराचनले पछिल्लो समय एनआरएनलाई हेर्ने दृष्टिमा उल्लेख्य सुधार आएको तथा सरकारले परिचयपत्रको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा अमेरिकी कंग्रेसको निर्वाचनमा चुनावी मैदानमा उत्रने तयारी गरिरहेका दर्शन रौनियारले विदेशी नागरिकता लिनु नेपालीका लागि बाध्यता भएपनि सधैं जन्मभूमिप्रति चिन्तित रहेको र एनआरएनसँगै मिलेर नेपाल र नेपालीका लागि केही गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । े ब्यक्तिगत रुपमा जति सफल भएपनि देश सफल नभएसम्म केही अर्थ नहुने बताउनुभएको छ ।
सम्मेलनमा विश्वका ४३ राष्ट्रका करिब १ हजार प्रनितिधि सहभागी हुने बताइएको छ । तीन दिनसम्म चल्ने सम्मेलन आयोजना गर्न सरकार र नेपाल उद्योग बाणिज्य संघले सहयोग गरेका छन् । एनआरएन सम्मेलनको मुख्य उद्येश्य विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरुलाई नेपालको विकासमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु रहेको छ । यस्तै दोहोरो नागरिकता, एनआरएनहरुको समूहिक लगानी, वैदेशिक रोजगारी लाई कसरी व्यवस्थित र मर्यादित गराउने लगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । सम्मेलनले आगामी दुई वर्षे कार्यकालका लागि नयाँ नृतेत्वसमेत चयन गर्नेछ । एनअरएनको अध्यक्ष पदमा वर्तमान अध्यक्ष देवमान हिराचन र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्ष जिवा लामिछानेले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । एनआरएनको आठ वर्षे इतिहासमा पहिलोपटक निर्वाचनका माध्यमबाट पदाधिकारी चयन गर्न लागिएको हो । यसअघि तीन कार्यकाल डा. उपेन्द्र महतो र एक कार्यकाल हिराचन निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए ।
अध्ययन, व्यवसाय र कामको खोजीमा २० लाख भन्दा बढी नेपाली विश्वका विभिन्न मुलुकमा पुगेका छन् । तीनै नेपालीहरुको सक्रियतामा आठ वर्ष अगाडि एनआरएन गठन भएको हो ।
This entry was posted in नेपाल समाचार, NRNA गतिविधि. Bookmark the permalink.